Isiseko seoyile efunekayo ye-oyile, Humidifier unikezo | YincOkuEasy
Inqwelo / $0.00
Ii-singles zeoyile ebalulekileyo
Iioyile ezininzi eziBalulekileyo
Izinto ezifunekayo kwioyile
Iikiti zeoyile eziyimfuneko
Ngumthi oxutywe neenkuni
Isasazi seoyile yeNebulizer
Ingxowa yeoyile ebaluleke kakhulu
Ilebheli yabucala | Yakha uphawu | Akukho ncinane
Qalisa iilebheli yabucala
Imirhumo yokuSeta iilebheli yaBucala
Imirhumo yokuCwangciswa kweDropshipping
Umdibaniso wokugcina iiodolo
Fumana iisampulu ngoku
* Senza konke okwenzeka emfihlekweni
* Ujolise ekukhuliseni ishishini lakho
Elona xabiso liphezulu leoyile eyimfuneko
SINGAYIQHUBELA NJANI UKUKHULA IBHASO LAKHO?
Ukuba uyakwazi ukutyala ngaphezulu kweedola ezingama-500 kwimveliso, singanceda ukwenza iimveliso zakho, ulungelelanise iipakeji zakho, kwaye ufezekise amaphupha akho ohlobo lwakho.
Sinokusebenzela zonke iimfuno zakho ze-ecommerce, kubandakanya ukufakwa iilebheli zabucala, izitikha ze-FNSKU, ukuthunyelwa eAmazon, ukwehla ukusuka eTshayina kubathengisi bezentengiso.
Njengomthengisi, uya kubonelela ngeemveliso ezifanayo nokhuphiswano lwakho. Ngokuqinisekileyo, amaxabiso asezantsi anokukwenza ube nomtsalane ngakumbi, kodwa uya kuthi ekugqibeleni unike ishishini lakho lingabi nzuzo. Sukujongela phantsi amandla okupakisha nakwezona zinto zilula zokwenza uphawu. sazakhela ii-fallshippers, amashishini amancinci kunye nabo bonke abaphakathi.
Senze "umsebenzi omdaka" ukuze ukwazi ukujonga kwintengiso!
Ufuna iilebheli zesiNtu? Sikukhusele. Sinokubonelela ngeenkonzo zoyilo lobuchwephesha kunye neemveliso ezinelebheli zabucala zeshishini labucala kwimbaleki emikhulu.
Iphepha lemveliso ye -onyoEasy linika uluhlu olucacileyo lwamaxabiso apho abathengisi abathengisayo
unokufumana izibonelelo ezahlukeneyo ngokweemfuno zentengiso. Sikwanikezela ngenkonzo ye-intanethienquiry ukuba uneemfuno ezahlukeneyo zemixube yemveliso okanye iiodolo ezinkulu
Ukuba unoluvo lweemveliso (i-kickstart, crowdfunding), kodwa ungazi ukuba uza kuyivelisa njani, sikukhokela ngenyathelo ngenyathelo.
Singanikezela ngexabiso eliphantsi, ukuya kwiqela labantu abangama-20, kunye nezisombululo ezininzi zokuxhasa ishishini lakho elikhulayo.
Ulwakhiwo lwethu lwamaxabiso luyabonakala kwaye alunazo iindleko ezifihlakeleyo kulo. Ixabiso lethu lolunye ukhuphiswano kwihlabathi, kwaye ngamaqhezu nje ezinye izinto zeAmerican okanye baseYurophu abahlawulisa ngokwesiqhelo. Ubuncinci bevolumu kunye neemfuno zeendibano. Sizama konke okusemandleni ukugcina imali kunye nexesha lakho.
Ukutyhubela iminyaka siyazingca ngokuba sigcine i-99% yexesha lokuhanjiswa kweenkonzo. Unokukhetha i-DHL kunye nezinye iinkonzo zekhuriya malunga nesantya kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Sisebenzisa kuphela iinkonzo ezivela kwiinkampani ezinokuthenjwa nezidume ngazo.
Iiyure ezingama-24 Inkonzo yoMthengi
Nanini na xa unengxaki, unokuhlala ufikelela kwinkonzo yabathengi ebukhoma ukuba uphendule kwii-imeyile okanye imiyalezo.
Uyigcina le Nzuzo.
Imiyalelo yakho ithunyelwa ngqo kumaziko okuzalisekisa kweAmazon. Inketho yokubeka uphawu ngaphakathi kwendlu kunye nokubhonkxa kuyafumaneka.
Ikhithi yeoyile ebalulekileyo
Ubuninzi beeoyile ezibalulekileyo
Ugcino oluyimfuneko lweoyile
Iiglasi ze-3D ezahlukeneyo
Ividiyo malunga nokuthengiswa kweesoyile ezifanelekileyo
Eyona nto ithandwa kakhulu kukuthengiswa kweesoyile ezifanelekileyo
Phezulu kwe-6 ukuya kwi-10ml yeeoyile eziBalulekileyo ze-E128 yeKhithi yokuQala yeoyile ebalulekileyo yeoyile
Ivenkile yamachiza e-Chestnut ebaluleke kakhulu inobunzima beoyile ye-X131
IiFireworks eziNinzi eziFunekayo kwiArhente yeTyhefu ye-X117U
Ivenkile enkulu yeLwandle i-oli eyimfuneko yeArhente yeLingo eyi-X118
I-Wholesale Shade ebalulekileyo yeArhente yeTyhefu ye-oyile eyi-X117G1
Ihowuliseyili ePhathekayo yeMoto ebaluleke kakhulu kwi-Diffuser X129 (Amanzi)
Ivenkile enkulu ye-oyile ebaluleke kakhulu kwi-oyile ye-X125A (Amanzi)
Ivenkile ye-Gourd ebaluleke kakhulu yeArhente yokuCoca i-oli eyi-X131A
Ngaba uyawafumana amaNqaku ekuThengwa kwe-diffuser kunye neoyile efunekayo kuMvelisi
Kunzima ukufumana nokukhetha umthengisi weoyile oyimfuneko.
Umgangatho ongalinganiyo weoyile eyimfuneko evela kule makethi, bambalwa abaThengisi banokuqinisekisa ubunyulu kunye nobomi beoyile eyimfuneko. Ngaphezu koko, iioyile ezifanelekileyo azikho phantsi komgaqo we-FDA.
Amaxesha amade okukhokela eoyile eyimfuneko evela kubaxhasi abathile, kunye neXesha lokuHambisa aliqinisekanga.
Bambalwa abaxhasi abazokubonelela ngezisombululo xa ujongene nemicimbi yezobuchwephesha ngeeoyile ezifanelekileyo.
Nangona abathengisi abaninzi bebanga ukuba bazikhathalele iinkampani ezincinci, uninzi azenzi.
Bambalwa abaThengi baneNkonzo epheleleyo yokuYila ioyile eyimfuneko yokuYila, ukuThengisa, ukuThengisa, ukuphucula ishishini, Inkxaso yezobuchwephesha, kunye neNkonzo yasemva kokuThengisa.
Kutheni ukhetha u-Aromaeasy
UMGANGATHO OPHAKAMILEYO weoyile eziyimfuneko nezahlukileyo ngexabiso lempahla ethengisa izinto esinazo Sineyona workshop ingcono yokuhambisa izixhobo e-China kushishino lwee-diffuser, kunye neeoyile ezifanelekileyo ezifumaneka kwiifama zehlabathi.
Iqela lethu lemveliso lihambelana ne-UL, ETL, TUV, ISO, KC, IC, SAA, C-Tick, RoHS, FCC, CE & GS, kunye nokulawula abaqulunqi kunye nabasebenzi ukuqinisekisa umgangatho.
Ukusuka ekuthengweni kwempahla eluhlaza ukuya kwimveliso, i-AromaEasy inenkqubo efanelekileyo yolawulo kunye nohlolo lomgangatho. Sinceda ukukhula kwakho kweshishini Siyakhathala malunga neshishini lakho!
I-AromaEasy inabasebenzi abanobuchule abanobuchule bokukubonelela ngoqeqesho lwabasebenzi kunye neenkonzo zokucebisa kwezobugcisa ukunceda ishishini lakho likhule. Kwaye ezi nkonzo zisimahla.
Ukukhula kweshishini lethu kusekwe ekukhuleni kweshishini lakho.ukuhanjiswa kwamancedo kunye nokusasazwa Siyaqonda ezona nkonzo zibalaseleyo zekhuriya ezifunekayo kuhlobo ngalunye nobungakanani beshishini.
I-AromaEasy inezixhobo ezisetyenziswayo kunye nokuhanjiswa, ukuqinisekisa iimveliso zakho ngonikezelo oluchanekileyo ngexesha. INKONZO YENKXASO-YONKE INKXASO YOKUXHASA 24/7 KWAKHO Iqela lobuchwephesha emva kokuthengisa lihlala lityelela nge-intanethi, ukuphendula ngokukhawuleza ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Ifama yethu yeHlabathi
I-AromaEasy isebenza nabavelisi abanokuthenjwa abavela kwihlabathi lonke, ukuqinisekisa umgangatho weoyile zethu ezifanelekileyo. Esi sisiqalo nje.
Simisela iilebhu kumzi-mveliso ngamnye ophambili kumazwekazi amathandathu, ukuqinisekisa ukuba wonke umthengi ufumana eyona oyile icocekileyo.
Kwakhona, sizisa imigangatho yethu ephezulu kuye wonke umntu esisebenza naye, abakhokelela kubaboneleli ukuba baphucule iindlela zabo zokusebenza ukuze bahambisane nomgangatho wethu.
Sinikezela ngezona zinto zibalaseleyo, kwaye sizibophelele ukuba ngcono nangomso kunokuba sinjalo namhlanje.
Eyona nto ithengiswayo ioyile ethengisa zonke izinto ezibalulekileyo
Jonga iintlobo zethu
Iingxowa zeoyile ezifanelekileyo
I-100% yeoyile efanelekileyo
Umgca wemveliso yokuthengisela ii-oli ezahlukeneyo ezifanelekileyo
Umgca wemveliso ye-AromaEasy yamkela ukuhamba kokuhamba, ukuhambisa ngokuzenzekelayo kunye nokusebenza okuphezulu kwemveliso.
Umgca wokuvelisa unokuhlangabezana nesixa esingaphezulu kwe-200,000, 2 yearoma ezahlukileyo ngenyanga. Kwaye ngoku sivelisa i-XNUMX yezigidi zeephunga ezichasayo ngonyaka kubathengi abavela kwihlabathi liphela.
Abasebenzi banamava oqeqesho lobungcali. Izakhono zemveliso ezinobuchule kunye nekhwalithi ehambelanayo yokubonelela ngesiqinisekiso esithembakeleyo sokuveliswa komgangatho ophezulu kunye nexabiso elifanelekileyo lephunga.
Indawo yokusebenzela yenkampani ilawulwa ngokungqongqo ngokobuninzi be-5S ukuqinisekisa ucoceko, ucwangco, ukusebenza ngokukhuselekileyo kunye nokukhuseleka kwendibano.
Abalingane ekufuneka sibenombulelo kubo
Ixesha lokuqala lokujongana ne-AromaEasy. Umthengisi othembeke kakhulu kunye nokuhambisa kunye nokuthumela ngokukhawuleza e-USA. Yonke imibuzo iphendulwe ngokukhawuleza. Siza kuthenga kwakhona kwi -onyoEasy kwakhona!
Ukuthenga nge -avutaEasy kusebenza ngokumangalisayo kwaye kuyakhawuleza. Nditsho ne-inshurensi yezothutho kunye nenkonzo yokulandela.
Ndiyabulela, eli lixesha lethu lokuqala ukusebenzisa i-AromaEasy ekuthengweni kwewebhusayithi, kunye nomgaqo-nkqubo wakho wokuqinisekisa, siziva sikhuselekile kwaye siyathemba ngeenkonzo zakho. Siza kuqhubeka kolu thenga kwixesha elizayo.
zizonke iioyile ezifanelekileyo
Ndiyakuthanda ukusebenzisa i-Aromaeasy ukwenza imveliso zam. zizinto ezikumgangatho ophezulu kunye nabathengisi ekulula ukusebenza nabo kwaye bahlangabezana nolindelo lwam oluphezulu. Kwakhona, ukulandela iiphakeji zam kunceda ukuseta ulindelo lwam lokufumana izinto ezithunyelwe e-USA.
I -onyoEasy® ikunikezela ngeemveliso ze-aromatherapy ezilungileyo ukuxhasa impilo yakho.
I-AromaEasy ineminyaka engaphezulu kwe-12 yamava kushishino lwee-diffuser ezinukayo. Sinikezela nge-diffuser kunye neeoyile ezifanelekileyo ngamaxabiso apheleleyo, ekhokelela abanye abathengisi. Kwaye ioyile zethu zeoyile eziyimfuneko zithengiswa kwihlabathi liphela ngexabiso le-130 yezigidi ngonyaka. Emva kweminyaka yophuhliso, i-AromaEasy ibikwindawo ekhokelayo kwi-R & D phakathi kwamashishini eshishini elinye. Sivelisa ngaphezulu kwe-30 yeentlobo zevumba elisasazeka minyaka le kwaye sikunika inkonzo elungiselelwe wena.
Malunga nenkqubo yethu yoLawulo loMgangatho
I-AromaEasy yafumana uthotho lweziqinisekiso ezinje nge-ISO9001, ISO14001, BSCI, kunye ne-OHSAS18001. I-Oils Efunekayo nganye ye -avutaEasy ihamba ngovavanyo olunzima lokuqinisekisa ukuba zifakwe ibhotile kwifomu yazo emsulwa, zizisa ekhayeni lakho ngaphandle kwezingcolisi, zongezwa iikhemikhali okanye izinto ezingafunekiyo. Ukususela ekuqaleni, i-AromaEasy izabalazela ukuzisa impilo kunye nolonwabo kubomi babo bachukumisayo.
Malunga netekhnoloji yethu yamva nje
I-AromaEasy ibonelela ngeoyile eyimfuneko kunye nokusasazeka kuma-70,000 + abathengisi abakhulu, iisaluni kunye neehotele kuMantla eMelika. Simamela ingxelo yabasebenzisi bokugqibela emva koko sizise izimvo ezintsha kwiziqhamo, sibenza ngcono ubomi bakho.
I-Aroma diffuser holder carousel, aromatherapy kits, ii-ceramic ii-cusic diffusers ezinobuchule beBluetooth®, i-nebulizing diffusers, kunye nee-wireless car diffusers yimizekelo nje embalwa yempumelelo ethi i -onyoEasy ™ ityhile emhlabeni. Umsebenzi wethu ngowokumisela imigangatho ephezulu ukuze sikwazi ukwenza umhlaba ube yindawo engcono.
Yonyusa imbuyekezo yakho kutyalo mali ngentsebenzo ye-AromaEasy okanye ubambiswano oluhlangeneyo. Apha kwi-AromaEasy
YENZA IXESHA LOKUFUNDA
I-12 + yentlaka yokuqhumisa ebalulekileyo yeziBonelelo zeoyile kunye nokuSebenzisa kwayo ngokuBanzi
intlaka yokuqhumisa ibalulekile izoyile zeoyile eziyimfuneko zisetyenziselwe amawaka eminyaka [...]
Uyenza njani iSanitizer yeZandla ekhaya
indlela yokwenza i-sanitizer yesandla Ewe, akukho nto ibetha ukuhlamba izandla kude kube ngoku ekuthinteleni izifo ezingubhubhane [...]
Iioyile ezifanelekileyo zeBlisters
Nasi isikhokelo esifutshane seAromaEasy kwiioyile eziBalulekileyo zeeBlisters Blisters ezinokucaphukisa [...]
Iioyile ezifanelekileyo zePain Back
Iioyile ezifanelekileyo zePain Back Isifundo sibonisa ukuba malunga neepesenti ezingama-80 zabantu baseMelika [...]
Iioyile ezifunekayo ngokomoya
Iioyile eziyimfuneko ezivela kwizityalo zihlala zidlala indima kwiminyhadala yokomoya, inceda abantu ukuba bahlale [...]
Iioyile ezifanelekileyo zokubulala iiNtsholongwane
Nasi isikhokelo esifutshane seAromaEasy malunga neeoyile ezifanelekileyo zokubulala iintsholongwane Ngala maxesha anzima, [...]
Ungazisebenzisa njani ioyile eziBalulekileyo kwiShower
Esi sithuba sisikhokelo sokugqibela seAromaEasy sendlela yokusebenzisa iioyile ezifanelekileyo kwishawa. [...]
Ioyile ezifunekayo ukuze kugcinwe amanzi
Esi sithuba sisikhokelo ekukhetheni iioyile ezifanelekileyo zonyango lwendalo lwamanzi [...]
Amashishini kwihlabathi liphela athembekile
I-AromaEasy ukwakha iimveliso zabo
Ifowuni / WhatsApp / SMS / Skype:
ISIXEKO SOSHISHINO CA 91745
Imigaqo yesivumelwano engakhethi cala
Akukho mgaqo-nkqubo wesipho
Sayina incwadi yeendaba
Bhalisa ukuba ngowokuqala ukwazi malunga ne-AMAZING ekufikayo, intengiso kunye nokunye!
I-Copyright 2022 © Yinkquboe